Miyaana la oran karin Turkidu waxay maal-gashadeen nafteena? WQ: Maxamuud Cabdi | Saadaal Media
Miyaana la oran karin Turkidu waxay maal-gashadeen nafteena? WQ: Maxamuud Cabdi
Oct 16, 2017 - jawaab
Dowlada Turkigu & shacabkeedu waxa ay Soomaaliya usoo gurmadeen islamarkaana ay garab istaageen xili ay shacabka Soomaaliyeed isu raaceen gumaadka argagixisada & abaaro. Caalamkuna uu xiligaas u arkayey Soomaaliya inay tahay bahala galeen.
Madaxweynaha Turkiga oo aan anigu u aqaan Geesiga Muslimiinta Recep Tayyip Erdoğan xiligaasna ahaa ra’iisulwasaaraha Turkiga ayaa booqasho ku tagay magaalada Muqdisho oo aysan madaxda caalamku tagi jirin, marka laga reebo xoghayihii hore Qaramada Midoobay Banki moon oo gashan jaakada la yiri xabadu ma karto (bulletproof) ayaa xiligaas booqday Muqdisho.
Wixii xiligaas ka danbeeyey Turkigu waxa uu noqday saaxiibka qura ee ay leedahay Soomaaliya. Waxaana uu si weyn u garab istaagay shacabka Soomaaliyeed. Isagoo usoo daabulay mucaawinooyin isugu jirta cunto iyo daawooyin. Waxaana uu scholarship siiyey kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed ah.
Sidoo kale Turkigu waxa uu ka qayb qaatay dib u dhiska dalkeena. Waxaana uu inoo dhisay iskoolo, isbitaalo & wadooyin. Waxa kale oo uu Soomaaliya ka dhisay safaarada uu ku yeeshay Muqdisho oo ah sida la sheegay saafaarada ugu weyn ee ku taala Africa & saldhiga ugu weyn ee ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa uuna ku tababari doono ciidamada xooga Soomaaliyeed, waaxana uu saldhigu halkii mar soo saari karaa 1500 oo askari oo qalabkoodu u dheer yahay.
14/10/2017 oo ah maalin xasuuq loo geystay shacabka Soomaaliyeed islamarkaana inoo ah maalin madow ayaa Turkigu waxa uu noqday dalka qura ee gurmadka inoo fidiyey. Madaxweyne Erdogon ayaa Soomaaliya usoo diray diyaarad uu la socdo wasiirka caafimaadka dalka Turkiga islamarkaana wada dhakhaatiir & daawooyin, dalkaTurkiga gayn doonta dadka qaba dhaawacyada culus. Dhanka kale safaaarada Turkiga ee Muqdisho waxay sheegtay bixinayso 10 million oo dollar si loogu samata bixiyo shacabka Soomaaliyeed ee ay wax kasoo gaareen qaraxii dhacay sabtidii.
Is weydii aaway dalalkii sheegan jiray inay walaalo yihiin Soomaaliya ee ay ugu horeeyaan bisadaha dhargay ee carabta, marka laga reebo Qatar oo la sheegay inay soo dirayso daawooyin iyo mucaawinooyin kale.
Maanta oo kale oo aad u baahantahay garab istaag waxaad kala barata walaalkaga dhabta ee kula qaybsada dhib kasta oo kusoo gaarta hadaba Turkigu si weyn buu inuu garab istaagay. Halka dalalka carabtu ee uu ugu horeeyo Imaaradku ay ka shaqaynayaan burburinta Soomaaliya, kala fogeynta Soomaalida & boobka dekedaha dalkeena.
Hadaba miyaana la oran karin Turkidu waxay maal-gashadeen nafteena? Anigu waxaan aaminsanahay in turkidu yihiin nasabka iyo gobta la sheego. Waxayna maalgashadeen nafteena. Hadii shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay cid abaal u hayaan waxay abaal aysan weligood gudi karin u hayaan dowlada Turkida & Shacabkeeda.